Rut 2 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bengali Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Myanmar Sign Language Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Punjabi (Roman) Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Torres Strait Creole Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Rut kɔsesaw nnɔbae ase wɔ Boas afuw mu (1-3)
Rut ne Boas hyiae (4-16)
Rut kaa Boas adɔe ho asɛm kyerɛɛ Naomi (17-23)
2 Ná Naomi kunu wɔ obusuani bi a ɔwɔ sika paa. Ne din de Boas,+ na na ofi Elimelek abusua mu. 2 Moabni Rut ka kyerɛɛ Naomi sɛ: “Mesrɛ wo, ma menkɔ obiara a menya n’anim dom afuw mu nkodi n’akyi nsesaw baali* a wɔatwa awie no ase.”+ Enti Naomi ka kyerɛɛ no sɛ: “Me ba, kɔ.” 3 Ɛnna ɔkɔ kodii wɔn a wɔretwa baali no akyi kɔsesaw ase. Baabi a okopuei no, na ɛhɔ yɛ Elimelek+ busuani Boas+ afuw mu. 4 Emu hɔ ara na Boas fi Betlehem bae, na okyiaa adwumayɛfo no sɛ: “Yehowa nka mo ho,” na wɔn nso gyee so sɛ: “Yehowa nhyira wo.” 5 Ɛnna Boas bisaa aberante a ɔhwɛ adwumayɛfo no so no sɛ: “Saa ababaa yi fi he?” 6 Aberante no buae sɛ: “Ababaa no yɛ Moabni;+ ɔne Naomi na efi Moab asaase so bae.+ 7 Ɔbɛkae sɛ, ‘Mesrɛ wo, ma minni adwumayɛfo no akyi na mensesaw baali a wɔatwa awie* no ase.’+ Enti ɔbae, na wagyina ne nan so fi anɔpa abesi sesɛɛ. Afei ara na wakɔtena apata no ase regye n’ahome kakra.” 8 Ɛnna Boas ka kyerɛɛ Rut sɛ: “Me ba, tie nea mereka yi. Mfi ha nkɔ baabiara, nkɔ afuw foforo biara mu nkɔsesaw nnɔbae ase; di me mmaawa yi akyi.+ 9 Hwɛ afuw no fã a wɔretwa no, na di wɔn akyi. Maka akyerɛ mmerante no sɛ wɔmmfa wɔn nsa nnka wo.* Sɛ osukɔm de wo a, nsu a mmerante no akɔ agu ahina mu no, nom bi.” 10 Ɛnna Rut bɔɔ ne mu ase de n’anim butuw fam, na ɔkae sɛ: “Ɛyɛɛ dɛn na ɔhɔho te sɛ me, me ho asɛm ahia wo na manya w’anim dom sɛɛ yi?”+ 11 Boas nso ka kyerɛɛ no sɛ: “Nea wo kunu wu akyi woyɛ maa w’ase no, mate ne nyinaa; woagyaw wo papa ne wo maame ne w’abusuafo hɔ abɛtena nnipa a wunnim wɔn da mu.+ 12 Nea woayɛ nti, Yehowa nhyira wo.+ Yehowa, Israel Nyankopɔn a woabɛhwehwɛ ahobammɔ wɔ ne ntaban ase+ no mma wo akatua pa.”* 13 Ɔno nso kae sɛ: “Me wura, ma minnya w’anim dom daa efisɛ woakyekye me werɛ, na woaka asomdwoe nsɛm* akyerɛ w’abaawa, nanso menyɛ wo mmaawa no mu bi mpo.” 14 Eduu adidibere no, Boas ka kyerɛɛ no sɛ: “Twiw bɛn ha bedi paanoo no bi; fa bɔ nsã a emu kaw no mu.” Enti ɔkɔtenaa adwumayɛfo no nkyɛn. Akyiri yi, Boas maa no nkyewe, na odidi mee ma ebi kae. 15 Bere a ɔsɔree sɛ ɔrekɔsesaw nnɔbae ase no,+ Boas ka kyerɛɛ ne mmerante no sɛ: “Baali a wɔatwa awie* no, momma ɔnsesaw ase no bi; monnteetee no.+ 16 Nea moaboaboa ano no nso, munyiyi bi ngu fam ma ɔnsesaw; monnteatea no.” 17 Enti Rut sesaw baali wɔ afuw no mu kosii anwummere.+ Ɔboroo nea wasesaw no, na onyaa bɛyɛ efa* baako. 18 Ɛnna ɔde baa kurow no mu, na n’ase huu baali a onyae no. Afei aduan a odii wɔ afuw mu no, ɔde nea ɛkae no+ maa no. 19 Ɛnna n’ase bisaa no sɛ: “Ɛhe na wokɔsesaw nnɔbae ase nnɛ? Ɛhe na wokɔyɛɛ adwuma? Nhyira nka onipa a ɔdom wo no.”+ Ɔkyerɛɛ n’ase no faako a ɔkɔyɛɛ adwuma, na ɔkae sɛ: “Ɔbarima a mekɔɔ n’afuw mu nnɛ no din de Boas.” 20 Naomi ka kyerɛɛ n’ase sɛ: “Yehowa a ɔda ɔdɔ a enni huammɔ adi kyerɛ ateasefo ne awufo no+ nhyira ɔbarima no.” Ɔtoaa so sɛ: “Ɔbarima no yɛ yɛn ho nipa.+ Ɔyɛ obusuani a obetumi agye yɛn.”+ 21 Na Moabni Rut kae sɛ: “Ɔsan ka kyerɛɛ me sɛ, ‘Di m’adwumayɛfo no akyi kosi sɛ wobetwa me nnɔbae no nyinaa awie.’ ”+ 22 Ɛnna Naomi ka kyerɛɛ n’ase Rut sɛ: “Me ba, eye sɛ wo ne ne mmaawa no bɛyɛ adwuma na obi ankodwoodwoo wo wɔ afuw foforo mu.” 23 Enti odii Boas mmaawa no akyi sesaw nnɔbae ase kosii sɛ bere a wotwa baali+ ne bere a wotwa hwiit no baa awiei. Na ɔkɔɔ so ne n’ase no tenae.+
^ Ebetumi nso akyerɛ, “baali a wɔakyekyere no atifi atifi.”
^ Anaa “wɔnnhaw wo.”
^ Anaa “akatua mu.”
^ Nt., “akomatɔyam nsɛm.”